हत्याको षड्यन्त्र भएपछि परदेशिन बाध्य भएँ
तात्कालिक प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको कोपभाजनमा परेर पदमुक्त गरिएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तात्कालिक प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले आफ्नो हत्या गर्ने षड्यन्त्र रचिएको सुइँको पाएपछि देश छोड्न बाध्य भएको बताउनुभएको छ । केही महिनायता प्रवासमा रहँदै आउनुभएका कार्कीले दूरभाष–संवादका क्रममा ‘तपाईंले देश किन छोड्नुभएको हो’ भन्ने घटना र विचारको प्रश्नमा जवाफ दिँदै भन्नुभयो, ‘मैले देश छोडेको होइन, छोडाइएको हो । मलाई मेरो देश प्राणभन्दा प्यारो लाग्छ र अहिले म जहाँ छु त्यहाँ आफ्नो देश सम्झेर तड्पिरहेको छु । देश बर्बाद गर्नेहरू र देश लुट्नेहरूले मलाई आफ्नो मातृभूमिमा रहनै नसक्ने परिस्थिति सिर्जना गरेका हुन् । मेरो माटोसँग टाढिएर रहनुपर्दा मलाई जुन छटपटी भएको छ, त्यो पीडा म यहाँ शब्दमा व्यक्त गर्न सक्दिनँ ।’
० कसले–कसरी तपाईंलाई देश छोड्न बाध्य तुल्याए, स्पष्ट गरिदिन सक्नुहुन्छ ?
– केही पुराना व्यापारिक घरानाका व्यक्ति, केही राजनीतिक दलका नेता र उच्च तहबाट अवकाशप्राप्त केही प्रहरी अधिकृतहरूले मेरो हत्या गर्नेसमेतको षड्यन्त्र रचेको सुइँको पाएपछि म नेपाल छोड्न बाध्य भएको हुँ । जसले मुलुकमा ब्रह्मलुट गरिरहेका छन् र जो लोकतन्त्र आफ्नो कब्जामा लिएर मनपरीतन्त्र चलाउँदै छन्, तिनले ममाथि दागा धरे । विदेशी लगानीमा आफ्नो जीवन निर्वाह गरिरहेकाहरूले मलाई विस्थापित गर्न सम्भव भएसम्मका उपाय अवलम्बन गरे । सतीले श्राप दिएको देशमा भीमसेन थापाहरू सेरिए, म खेदिएँ ।
० तपाईंले राज्यसँग सुरक्षा माग्न पनि त सक्नुहुन्थ्यो नि ?
– हेर्नुस्, मेरो कामका कारण ममाथि उत्पन्न सुरक्षा थ्रेटलाई लिएर विश्लेषण भयो र मलाई आजीवन विशेष सुरक्षा दिने भनी मन्त्रिमण्डलले निर्णय पनि गरेको हो । तर, मलाई जब सुरक्षा चाहियो, तब सबै सुरक्षा व्यवस्था हटाइयो । मैले आफ्नो सुरक्षाको लागि विभिन्न च्यानलबाट राज्यसँग अनुनयविनय गरेँ । क्याबिनेटले गरेको निर्णय मात्र कार्यान्वयन गरिदिए हुन्छ भनेर पनि पटक–पटक भनेँ । तर, कुनै सुनुवाइ भएन । हामीले त्यसबेला जो–जसलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएका थियौँ, जसमाथि निगरानी बढाएका थियौँ र जो अनुसन्धानको दायरामा परेका थिए, ती सबै घोषित या अघोषित रूपले एक भएछन् । मलाई टेलिफोनमा ज्यान लिनेलगायतका धम्की आउन थाल्यो, मेरो मुभमेन्ट हुने सम्भावित ठाउँहरूमा शङ्कास्पद मानिसका गतिविधि बढ्न थाल्यो । त्यस्तो अवस्थामा मैले आफू हुँडारहरूको बीचमा फसेको हरिणझैँ महसुस गरेँ र ज्यान जोगाउन अनेक उपाय गर्ने क्रममा बिदेसिन पुगेँ ।
० त्यसो भए अब तपाईं कहिल्यै नेपाल फर्कनुहुन्न त ?
– म पनि तपाईंलाई प्रश्न गर्छु– के नेपालमा कहिल्यै सुशासन र मानवराज वहाली हुँदैन र ? सधैँ यस्तै बेथिति र विकृति रहिरहला र ? असल मानिसले राम्रो काम गर्ने दिन पनि आउला नि नेपालमा ! देशमा राम्रा मानिसले शासन गर्ने दिन अवश्य आउनेछ र त्यतिबेला मुलुकमा कसैले पनि अन्याय महसुस गर्नुपर्ने छैन । म र मजस्ता मानिस जो देशभित्रै असुरक्षित महसुस गरेर बाहिरिनुपरेको छ तिनले स्वदेशका निम्ति केही गर्ने अवसर पाउने छन् । तर, मैले देशको अवस्था राम्रो भएपछि मात्र फर्कन्छु भन्न खोजेकोचाहिँ होइन, मेरो ज्यान सुरक्षित रहन्छ भन्ने विश्वास भएका दिन म स्वदेश फर्कन्छु । त्यो भोलि नै पनि हुन सक्छ र थप केही समय लाग्न पनि सक्छ ।
० देशका भ्रष्टाचारीहरू एक भएर तपाईंलाई दुःख दिएको भन्ने तपाईंको दाबी छ । तर, तपाईं ती को–को हुन् र तपार्इंले के गर्न लाग्नुभएको हुनाले उनीहरू एक भएर तपाईंका विरुद्ध जाइलागेका हुन् भन्ने विषयमा केही बताइरहनुभएको छैन, किन ?
– मैले राष्ट्रपतिसमक्ष गोपनीयताको शपथ खाएको छु । त्यसैले कानुनले तोकेको, बाध्य तुल्याएको या देशमा असामान्य स्थिति उत्पन्न भएको अवस्थामा मात्र मैले कानुननिर्दिष्ट स्थानमा गएर मुख खोल्ने हो । जहाँ पायो त्यहीँ बोलेर हिँड्ने कुरा भएन । संसद्को महाभियोग समितिमा बोलाएर सोधिएको भए म सम्मानित संसद्का माननीय सदस्यहरूसमक्ष आफ्ना कुराहरू राख्न तयार थिएँ र छु । समितिले मेरो स्पष्टीकरणसमेत नराखीकन प्रतिवेदन बनाएको र रेकर्डमा राखेको भन्ने सुनेर म स्तब्ध भएको छु । वास्तवमा मेरो भनाइसमेत नसमेटीकन प्रतिवेदनले पूर्णता पाउन सक्ने म ठान्दिनँ । एक न एक दिन मलाई यसबारेमा सत्य प्रकट गर्न पाउने कानुनी अवस्था र अवसर मिल्ने विश्वास छ । त्यस्तो अवसर आउँदा सबै तथ्यहरू कानुनसम्मत ढङ्गले म बाहिर ल्याउनेछु । कोही गैरजिम्मेवार र पूर्वाग्रही भए भन्दैमा मैले पनि गैरजिम्मेवार बन्न मिल्दैन ।